Chii Chinonzi Evhangeri? kubva Achida Mwari pamusoro Vimeo. Imwe vhidhiyo kubva hurukuro yangu vachishuva Mwari. Ivo neni akabvunza kana ndaigona Rap Vhangeri 2 maminitsi. Ichi chaiva kuedza kwangu
Ichi chikamu Mubvunzurudzo Ndakaita pamwe vachishuva Mwari. Ndichaenda kuposita wemigove sezvo dg anoisa navo Hip Hop uye Mukurwisa Chivi kubva vachishuva Mwari pamusoro Vimeo.
Sezvo vazhinji munoziva, Ndave ndichishanda pane bhuku kuenda pamwe Newest Album wangu, The Life Good. Eya bhuku rino vachange kwokusunungura pamwe Moody Vaparidzi musi October 1,...
The Life Good rwavakaita kubanha kure vhiki rino! Ona iyo zuva achava pedyo nemi. Tichatevera kuva Minneapolis, Michigan, Virginia Beach, Nashville, Orlando, uye Dallas. More dates will be added...
Ava Lyrics kubva rwiyo rwangu iLove pamusoro album yangu itsva "The Good Life.” Mumwe munhu kutambura iLove? ndima 1: My girlfriend’s name starts with an I Shines bright like stars in...
My chechina Solo Album, "Upenyu The Good” ave pamutemo yabudiswa! Tenga album kubva iTunes pano. Unogona kunhonga album kumusoro muzvitoro pana Lifeway, Christian Family, Mardel, and Target...